Research & Development Assistant Archives - Glory Assumption Space
Research & Development Assistant -Male / Female (5) posts
********************** URGENT REQUIREMENT ************************* မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Research & Development Assistant -Male (5)posts/Salary-150000Ks/Dagon Township. -ဘွဲ့ရှိရမည်။MS Office (Excel , Power Point) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ English Skill ကောင်းမွန်ရမည်။ - Research & Data Entry လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) ကျော်ရှိရမည်။ အသက် (၂၂) နှစ်မှ (၂၈)နှစ်အတွင်းရှိရမည်။ - ကားမောင်းတက်ပြီးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ ဈေးကွက်အတွင်း Data Collection ပြုလုပ်ရမည်။ နယ်ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ လိုအပ်ပါက အချိန်ပိုဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းသွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )